Ny resa-be dia paikady ara-barotra takiana | Martech Zone
Talata, Desambra 23, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tena mpankafy ny bilaogin'i Andy Sernovitz aho, Tss! Maniry aho fa nieritreritra an'izany! Androany anefa, tsy azoko antoka fa mifanaraka amin'i Andy aho.
Mpivarotra: Atsaharo ny fandefasana fampiroboroboana izay manomboka amin'izao fotoan-tsarotra izao, ny fomba fivarotana amin'ny fitotonganan-karena, na fampiroboroboana misy lohahevitra ratsy ara-toekarena hafa.
Manantena aho fa ho nieritreritra an'ity i Andy:
Manaova fikarohana amin'ny Fihenam-bidy ao amin'ny Google ary ho hitanao fa manaitra ireo isa. Ao anaty fitotonganana isika. Tafalatsaka anaty fitotonganana isika. Betsaka ny olona very asa. Ny fahatahorana ny hafa ho very asa dia mahatonga ny mpanjifa hampihena ny fandaniana. Tsy zavatra ratsy izany fa zavatra lojika.
Mety tsy ho toa ny miresaka momba ny fomba hitsitsiana ao anaty fitotonganana tsara - fa tsy ratsy koa. The ny fitotonganana dia ratsy, ny vokatrao na serivisy omenao dia mety mbola hisy ihany tsara.
Tsy ny akoho na ny atody… tsy niditra an-tsehatra izahay satria nanomboka niresaka momba ny fitotonganana ny olona na niresaka izany. Raha ny marina dia mety efa nanomboka herintaona lasa ny fitotonganana talohan'ny tena niresaka momba azy io. Izao isika dia ao anatiny, dia mila mandray andraikitra mba hamelomana azy velona.
Ny orinasa tsirairay dia tokony hieritreritra ny fomba hanararaotana tsara ny fitotonganana sy ny hafatra mifanaraka amin'izany. Inona no atolotry ny orinasanao amin'ireo orinasa na mpanjifa mitady fomba hampihenana azy ireo? Aleo ianao manomboka miresaka momba izany!
Ohatra tsara i Compendium Blogware:
Manome ny orinasako safidy hafa tsy dia lafo loatra ho an'ny mpivarotra hiteraka fitarika miditra ho an'ny orinasany. Araka ny filazan'ny eMarketer, eo an-tsena ho an'ny orinasa maro ny marketing:
Raha mpivarotra amin'ny orinasa aho, na mamela mpiasa sasany handeha na mitady toerana hokapaina, dia fantaro hoe inona no tadiaviko ao amin'ny Google? Mitady fomba hampihenana ny teti-bolako aho, toa tompon-daka, ary hamonjy ny asako mandra-pivoak'ity zavatra ity!
Antontan'isa mahaliana hafa momba ny Marketing amin'ny resa-be:
48% amin'ireo orinasa lehibe amerikana nalain'ny Pol MarketingSherpa tamin'ny volana septambra dia nilaza fa hajanona ny teti-bolan'ny media nentin-drazana; 21% no nilaza fa "manan-danja" ny fanapahana.
59% amin'ireo tompon'andraikitra ambony eo amin'ny sehatry ny varotra 175 voahilon'ny orinasa mpiasan'ny varotra Epsilon nanantena ny fihenan'ny tetibola ara-barotra nentin-drazana; 13% ihany no nanantena fiakarana.
85% amin'ireo mpivarotra 600 nohadihadian'i MarketingProfs Nanambara izy ireo fa hampihena ny fiara fitaterana nentin-drazana.
53% of Fikambanan'ny mpanao dokam-barotra nasionaly (ANA) Nilaza ireo mpikambana fa manapaka ny teti-bolan'izy ireo ho setrin'ny fitotonganana; 40% no nilaza fa nanova ny fifangaroan'ny fantsom-barotra amin'ny fantsom-bola ambany izy ireo.
Tsy ho tompon'andraikitra amiko, amin'ny maha Marketer ahy, ny tsy miresaka momba ny fitotongan-tany sy ny antony isafidiananay hafa amin'ny orinasa izay manandrana mitondra fiara raha tsy misy ny loharanon-karena taloha. Io no toetrandro tena ilaintsika hampiasaina sy hambolena.
Tokony ho marketing momba izany koa ianao.
Satroka tendron'i Jeff ao ny famolavolana ny rihana + mihetsika ho an'ny rohy mankany amin'ny taratasy eMarketer!
Tags: miampy irayWordPress
Dec 24, 2008 amin'ny 4: 44 AM
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho Doug. Nandeha lavidavitra kokoa aho ary nilaza fa raha tena te hanampy izahay dia hiteny amin'izy ireo amin'ny fomba mahery vaika ny fomba hialana amin'ny fahadisoana amin'ny toe-karena mitongilana na ny fihemorana na izay tianao hiantsoana amin'izao fotoana izao.
Mba hijerena bebe kokoa, dia lazaiko fa satria ny marketing dia singa manan-danja amin'ny totalin'ny drafitry ny fandraharahana, dia tokony ho lasibatra ihany koa ny mpandraharaha na ny tompon'ny orinasa indrindra fa ny tompona orinasa madinika izay matetika manao izany irery. Sahiran-tsaina ny ankamaroan'ireo tompona orinasa ireo, miandry ny firotsahan'ny kiraro manaraka ary manantena fa hisy hanome azy ireo torohevitra, torohevitra tsara.
Manaiky aho fa tsy maintsy milaza ny marina amin'izy ireo isika: "Fomba folo hitazomana ny orinasa kelinao tsy ho latsaka ao anatin'ity toe-karena ity" na zavatra manaraka an'io andalana io. Tsy maintsy milaza amin'izy ireo isika fa tokony handany amin'ny varotra amin'ity karazana toekarena ity izy ireo ary nahoana.
24 Desambra 2008 à 5:02
Lahatsoratra tsara, Doug, tena mahitsy sy raharaham-barotra-y. Niaraka taminao tao amin'ny Friend Connect aho.
Fanontaniana: Nahoana no betsaka ny olona–nahoana no misy olona–mino fa ny varotra no fanapahana voalohany indrindra? Tsy tokony ho ny mifanohitra amin'izany ve? Maninona raha mifono akanjo tsy hita maso fotsiny isika rehetra? Mitovy ihany izany. Ahoana no fomba hitadiavan'ny orinasa iray vola raha tsy misy mahita azy ireo?
Amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny vola madinika, ny varotra dia tsy MAMPIASA fotsiny, fa amin'izao vanim-potoanan'ny marketing ara-tsosialy izao dia MIHAINO sy mamaly mifanaraka amin'izany. Manara-maso, mandehandeha. Ny fanapahana ny varotra amin'ity tranga ity dia mitovy amin'ny aotirisy mandevina ny lohany ao anaty fasika, na ny ankizy manakimpy ny masony sy manarona ny sofiny.
Mila misambotra ny fiaran-dalamby rehetra ny mpanatanteraka: ny varotra no zavatra farany tokony hotapahinao. Izany amiko dia tena izy, feno ary tsy misy atidoha. Tsy misy saina! Tapaho ny marketing?! Inona?! Azafady?!
…ary izany, ry namana, no fihetsika tsy maintsy asehontsika mpivarotra raha te ho tafavoaka velona isika.
24 Desambra 2008 à 6:19
Fanontaniana lehibe, Will! Ny roa cents dia ny ankamaroan'ny mpivarotra dia voatendry hanao hetsika fa tsy hanao drafitra. Ny departemantan'ny varotra dia tsy manana mpiasa hatomboka amin'ny famokarana ny fitomboana sy ny REHETRA izany fitomboana izany ho an'ny orinasa iray. Satria tsy afaka mampiseho ny hasarobidiny amin'ny fikambanana izy ireo dia matetika izy ireo no voalohany amin'ny sakana.